Budata Google Search maka Windows
Budata Google Search
Free Budata maka Windows (3.20 MB)
Budata Google Search,
Iji Google Search, ngwa nchọta Google maka Windows 8, ị nwere ike nweta ọdịnaya ị na-achọ na ịntanetị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Site na ngwa Windows 8 nke igwe nchọta na-ewu ewu, ị nwere ike ịchọ otu ịchọrọ, site na ịpị ma ọ bụ site na iji olu gị nye iwu. Ọchụchọ Google, nke nwere igwe nchọta smart nke na-aghọta okwu ị na-achọ tupu ị pịnye ya, na-enye nhọrọ niile maka ịchọọ nke ọma.
Site na ịpị aka nri na ngwa a, ị nwere ike ime ka menus niile hụ, nke ga-eme ka ọchụchọ gị dị mfe. Ị nwere ike ịhụ ndepụta ọchụchọ gị nso nso a, mee ọchụchọ olu, yana nweta ndụmọdụ ọchụchọ.
Budata Google Image Search
Ọchụchọ onyonyo Google bụ mmemme dị irè emebere nke ọma iji budata foto Google nụzọ dị mfe na ngwa ngwa site na iji obere ọpịpị na obere mgbanwe. Ọ na-enye gị ohere ibudata...
Nhọrọ nkuzi nke na-enye gị ohere ịme ọchụchọ ziri ezi karịa Hụ oku na-adịbeghị anya na ihuenyo ụlọ Mee nyocha olu (Ikwesiri ikwe ka ngwa ahụ nweta igwe okwu gị maka njirimara a.) Nweta ngwa Google niile site na iji otu mmetụ Chekwa akụkọ ihe mere eme weebụ.
Google Search Ụdịdị